निजी बिधालयको भबिष्य कस्तो होला?- सुग्रीम विश्वकर्मा
जनमत पार्टी रुपन्देही को मायादेवी गाउँपालिका स्तरीय बैठक सम्पन्न भएको
bishal baniya 1 year ago 5
हाम्रो वरिपरि कतिपय यस्ता मान्छेहरु छन् । जुन कि वर्सौ वर्ष देखि एउटै Position मा बसेका छन् । उनीहरुको नत Promotion हुन्छ , नत salary बढछ । र येस्तो अरु मान्छेहरु पनि छन् । उनीहरु संग ठुलो डिग्री पनि हुदैन तर पनि तिनीहरुले थोरै समयमा Ptomotion पाइहल्छन् ।
र तिनीहरु को Salary बढीहल्छ । येदि पहिलो Type को मान्छेहरुलाइ A भनौं र दोस्रो Type को मान्छेहरुलाइ B भनौं । अब हामी Type A र Type B का मान्छेहरुको situation बुझ्ने प्रयास गर्छौ ।
जुन Type A वाला मान्छेहरु हुन्छन् । तिनीहरु संग येस्तो समस्या हुन् सक्छ कि तिनीहरुले जुन काम गरिरहे छन । त्यो काम मा तिनीहरु को रुचि हुदैन । वा तिनीहरु संग येस्तो समस्या पनि हुन् सक्छ कि तिनीहरुले धेरै समयमा Low Quantity मा Low Quality काम गर्छन् होला ।
र B Type वाला मान्छेहरुले थोरै समयमा धेरै राम्रो Quality काम गर्छन् होला । र आफ्नो Field मा प्रगति हासिल गर्छन होला । यहाँ जुन दोस्रो स्थती छ जसमा Type B वाला व्यक्तिहरु छन । जहाँ थोरै समयमा धेरै र राम्रो Quality वाला काम गर्छन । त्यसैलाइ नै Productivity भनिन्छ । र येस्तो अवस्था मा हामी यो भन्न् सक्छौं कि Type A वाला व्यक्तिहरु धेरै Productive छन । र Type B वाला व्यक्तिहरु थोरै Productive छन ।
येहि Productivity लाइ विद्यार्थी को जीवन मा राखेर हेरौं । जुन विद्यार्थीहरु कम Productive हुन्छन् । तिनीहरुले धेरै समय लगाउ छन । र थोरै पढाई गर्छन् । त्यही भयर तिनीहरु परिक्षा मा Average अन्क प्राप्त गर्छन् । त्यही ठाँउ मा जुन विद्यार्थीहरु धेरै Productive हुन्छन् ।
तिनीहरुले थोरै समयमा धेरै पढाई गर्छन । र परिक्षा मा राम्रो अन्क प्राप्त गर्छन् । अब तपाईंलाई अनुभव भइ सकेहोला कि Productivity के हो भनेर अनि Productive हुनु कति आवस्यक छ । येदि तपाई पनि आफ्नो Productivity बढाउन चाहनु हुन्छ भने यो लेख अन्त्य सम्मा आवस्य पढ्नु होला । यो लेख मा मैले तपाईंलाई6वटा तरिका बताउने छ । जस्को प्रयोग बाट तपाईं आफ्नो productivity बढाउन सक्नु हुन्छ ।
1. Make Your morning routine
बिहाना बिहाना उठानुका धेरै फाइदाहरु छन । जब हामी बिहना चाडैं उठछौ तब हामी संग धेरै समय मिल्छ । र यो समयमा हामीले अफ्नो पुरै दिन को Schedule बनाउन सक्छौ । जसले हाम्रो productivity बढाउन मदत गर्द्छ ।
२. Daily Exercise
हामी बिहना चाडैं उठे पछी दिन्दिनै शरिरिक क्रियाकलाप जस्तैः व्ययाम , कसरत गर्नु पर्छ । दिन्दिनै येस्तो गर्नाले हाम्रो शरिरको Metabolish Active रहन्छ । र शरीरमा कुनै प्रकरको आलस्य पनि आउदैन । साथै शरिरिक रुपमा हामी धेरै Energetic मह्सुस गर्छौ । येस्तो भएपछी हाम्रो productivity बध्दै जान्छ ।
आज पुरै सन्सार योगाको फाईदा बाट परिचीत भइ सकेको छ । र पुरै सन्सार का मान्छेहरु योगा गर्नुमा जोड दिन्छन । योग गर्नाले हाम्रो मस्तिष्क शान्त हुन्छ । साथै तनाव पनि कम हुन्छ । योग गर्नाले हाम्रो मस्तिष्क खुल्ला हुन्छ । येदि यि सबै काम तपाईंले गर्नु भयो भने तपाई को productivity level माथी हुनेछ ।
4. Find Your Productive Period
दिनमा एउटा येस्तो समय हुन्छ । जुन समय मा हाम्रो ptoductive level धेरै High हुन्छ र त्यो पनि प्रकृतिक रुपमा हुन्छ । र यो फरक फरक मान्छे को फरक फरक हुन्छ ।
5. ८०/२० नियम प्रयोग गर्नुस ।
८०/२० नियमले भन्छ कि हाम्रो जिवनमा कुनै कुनै येस्तो कामहरु हुन्छन् जुन ८०% काम गरेपछि २०% मात्र परिणाम आउछ । र कुनै कुनै येस्तो कामहरु पनि हुन्छन् जुन २०% काम गरेपछि ८०% परिणाम आउछ । तसर्थ आफ्नो ptoductivity बढाउन को लागी २०% मा ध्यान रख्नुस र ८०% परिणाम को लाभ उठाउनुस ।
6. Master Your Skill
आफ्नो skill लै तिखो गर्दै जनुस । तपाईंले आफ्नो ptoductivity बढाउन को लागी आफु भित्र भएको skill लाइ update गर्दै जनुस र साथ साथै अफ्नो field मा अनुभव प्राप्त गर्नुस् ।
5 thoughts on “How To Increase Productivity”
Tarika bataunu bhayena ni lekhak jyu
thank you sudeep ji, ab you article update bhaisakeko cha tapaile pura article padhna saknu hunxa
Pingback: रिसलाई नियन्त्रण गर्ने १०वटा तरिकाहरु । How To Control Anger In Nepali - love lumbini
Pingback: धनी मान्छेहरुको सब भन्दा राम्रो गुण| Best Quality Of Rich Person
Pingback: Top 10 Most Unique & Interesting Facts That Make You Smart | LoveLumbini - love lumbini
ShareTweetSharePin0 Shares आज को ताजा खबर , नेपाल को रुपन्देही जिल्ला मा एकासी वर्षा भएको हुनाले लुम्बिनी जाने मुख्य बाटो बाढी को पानी मा डुबियो । एक दिन पहिला येहि नदि मा पानी को स्तर आधा थियो । अनि गयेको ३ दिन देखि एकदम जोरशीत दिन भरी बादल लागेको थियो […]
मोबाइल इन्जिनियर कसरी बन्ने सम्पूर्ण जानकारी |How To Become A Mobile Engineer In Nepali | Full Information